Hantida maguurtada ah Vs Saamiyada: Keebaa Maalgashi Wanaagsan - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Hantida Maguurtada Vs Saamiyada: Keebaa Maalgashi Wanaagsan
Xiriirinta sawirka: tpihomes
Shakhsiyaad badan ayaa laga yaabaa inay ku xayiran yihiin jahwareerka isku dayaya inay go'aansadaan madal maalgashi oo ay ku lug leeyihiin - Real Estate vs stocks. Hagaag, haddii aad tahay mid iyaga ka mid ah markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah. Maqaalkan, waxaan isku dayi lahaa inaan iftiimiyo dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato maalgashiga hantida maguurtada ah iyo sidoo kale kaydka.
Waxaan sidoo kale ku siin lahaa liiska faa'iidooyinka iyo khasaaraha sida ay khusayso madal kasta oo maalgashi waxaana rajeynayaa in aan kaa caawin lahaa in aad samayso go'aanka saxda ah ee adiga kuu gaar ah. Adigoon wakhtigaaga lumin, aynu u dhaadhacno ganacsiga, innaga oo marka hore fahanno in yar oo ka mid ah waxa ay labada madal maalgashi ka kooban yihiin iyo macnaha.
Waa maxay Maalgelinta Guryaha?
Hantida ma-guurtada ah sida aynu wada ognahay waa warshado horumarsan oo faa'iido badan leh oo wadartoodu tahay ilaa suuqa trillion-dollar ilaa maantadan la joogo.
Hantida ma-guurtada ahi way sii socotaa inay koraan oo ay qayb muhiim ah ka noqoto nolosheena. Dhammaanteen waxaan mar uun u baahannahay saqafyo madaxa ka sarreeya ama goob shaqo ama guri ahaan ama meel aan ka geli karno hawlo firaaqo ah waxaana dhismayaashan la dhisay oo lagu dhisay qalab gaar ah oo ujeeddadaas muhiimka ah loogu talagalay.
Fahamka qaab-dhismeedka hantida ma-guurtada ah waxay ku dhex jirtaa fikradaha Dhaqaalaha, khatarta iyo Maalgashiga. Maalgelinta hantida maguurtada ah waa ciyaar fudud oo leh hal yool kaas oo ah in laga faa'iidaysto raasumaalka ama maalgashiga la isticmaalo.
Hantida ma-guurtada ahi waxay caadi ahaan u baahan tahay wakhti faa'iido lagu ururiyo sidaas awgeedna waxa loo yaqaan maalgashi wakhti dheer ah. Iyadoo dhammaan maalgashiyada ay leeyihiin khatar gaar ah, maadaama ay la xiriirto maalgashiga hantida maguurtada ah, suurtogalnimada faa'iidada inta badan mararka qaarkood waxay dhaaftaa khatarta ku lug leh.
Fikradda hantida ma-guurtada ah waa mid dhinacyo badan leh oo sidaas oo kale ka hor inta aanad u dhexgelin adduunka hantida maguurtada ah waxaad u baahan doontaa inaad soo koobto nooca maalgashiga hantida maguurtada ah ee aad rabto inaad ku lug yeelato.
Akhri: Sida loo iibsado Adobe Stock si loo soo celiyo 2022.
Sida Loo Bilaabo Maalgelinta Guryaha
Awoodaha ku xiran saaxadda hantida ma-guurtada ah waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn marka loo eego dhaqaalaha. Iyada oo aan la dafiri karin faa'iidooyinka iyo khatarta suurtagalka ah, caadooyinka amaahda, iyo helitaanka wareegyada socodka lacagta caddaanka ah waxaad caddayn kartaa sababta maalgashadayaasha sare ee badan ay u doortaan goobtan.
Si kastaba ha ahaatee waxaa jira jaangooyooyin gaar ah oo lagu eegayo waxa sharci ah iyo waxa aan ahayn sidaas darteed daraasad sax ah oo ku saabsan fursadaha ayaa loo baahan yahay ka hor inta aan lagu darin maalgelinta noocaas ah faylalkaaga. Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in inta badan maalgashadayaasha marka loo eego hantida ma guurtada ah ay dhif tahay inay si toos ah u iibsadaan maalgashi magacooda sababo dhowr ah oo intooda badan ah amniga.
Inta badan maal-gashadayaasha hantida ma-guurtada ah waxay tan u sameeyaan qaab beddelaad guul-darraystay ama khadka nolosha haddii ay dhacdo in hantidu qabowdo ama arrin kale oo xallinta dacwad oo laga yaabo inay waxyeello u geysato hantidaada sheegtay.
Sababtan awgeed, badi maalgashadayaasha hantida ma-guurtada ah waxay sameeyaan hay'ado sharci ah si ay u iibsadaan maalgashiyada sida shirkadaha mas'uuliyadda xaddidan (LLC).
Kuwani waa xeerar aasaasi ah oo qof kasta oo doonaya inuu suuqa soo galo uu ka warqabo. Sida ay yiraahdaan, "macluumaadku waa awood" oo tan, waxaad awoodi kartaa inaad khaladaad gaar ah u yeelato sida qof cusub oo ku jira suuqa maalgashiga hantida maguurtada ah.
Waa maxay dariiqooyinka loo Maal-gashiiyo Guryaha Ma-guurtada ah
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ku maalgashan karto hantida maguurtada ah. Siyaabaha tirada badan ee loo yaqaan, aaminaadaha maalgashiga hantida maguurtada ah, ama REITs, ayaa ah kuwa ugu caansan bulshada maalgashiga.
Maalgelinta iyada oo loo marayo REIT waxay ku siinaysaa faa'iidooyin gaar ah kuwaas oo aadan si toos ah u iibsan hantida ma-guurtada ah laakiin ka iibso saamiyada shirkadda leh hantida ma-guurtada ah ee ribada oo si ficil ah u qaybisa dakhligeeda qayb ahaan.
Waa maxay kaydka
Hadda waxaan qabsanay fikradda aasaasiga ah ee hantida maguurtada ah, aan eegno suuqa soo socda ee xiisaha kaas oo ah suuqa saamiyada.
Asal ahaan, saamiyada sidoo kale loo yaqaan sinnaanta ayaa ah ammaan ka dhigan milkiilaha qayb ka mid ah shirkad. Mulkiilaha saamiyada, si kastaba ha ahaatee, waxa uu xaq u leeyahay qaybo ka mid ah hantida shirkadda iyo faa'iidada la siman ama u dhiganta inta saamiyada ay leeyihiin.
Qaybaha caadiga ah ee saamiyada waxaa loo yaqaan saamiyo. Saamiyada waxaa lagu iibsan karaa ama lagu iibin karaa suuqa sarrifka saamiyada. Saamiyada waxaa sidoo kale lagu iibin karaa iibka gaarka ah waana aasaaska faylalka maal-gashadayaasha badan.
Dhammaan wax kala iibsiga ku salaysan saamiyadu waa inay sidoo kale waafaqaan qawaaniinta dawladda ee loogu talagalay in laga ilaaliyo maalgashadayaasha hawlo kala duwan oo khiyaano ah oo ay ku jiraan lacag-dhaqidda.
Waqti ka dib, waxaa la dhihi karaa kaydku waa mid ka mid ah goobaha maalgashiga ee ugu xasiloon kuwaas oo u adkeystay tijaabada waqtiga oo leh faa'iidada ugu dheer ee taagan khatarta ugu yar. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa saamiyada saamiyada online-ka ah iyo sidoo kale wax-is-weydaarsiga internetka ee taageera qaabka saamiyada.
Marka la eego kaydka iyada oo aan si qoto dheer loo gelin, saamiyadu waxay inta badan u qaybsamaan laba nooc oo waaweyn kuwaas oo kala ah: kaydka caadiga ah iyo kaydka la doorbido.
Saamileyda guud waxay xaq u leeyihiin inay helaan saami qaybsi iyo inay u codeeyaan shirarka saamilayda halka saamilayda la door bidayo ay xadidan yihiin oo aanay xor u ahayn inay ka codeeyaan shirarka daneeyayaasha.
Daneeyayaasha la door biday caadi ahaan waxay helayaan soo celin sare oo ku saabsan maalgashiga iyo haddii ay dhacdo in la baabiiyo ama la waayo waxay helaan sheegasho weyn hantida marka loo eego daneeyayaasha guud. Markaa, halkaas waxaad haysataa, aasaaska ka dambeeya kaydka iyo waxa ay dhab ahaantii ka dhigan tahay.
Marka xigta, waxaanu eegi doonaa sida iyo halka laga iibsan karo saamiyadan si loo sii adkeeyo aqoonta ilaa hadda. Haddaba, aynu u gaadhno.
Akhri: Dib u eegista Maareynta Maalka Shakhsi ahaaneed ee Citi | 2022
Sideed u iibsataa kayd?
Si aad u bilowdo safarkaaga maalgashiga saamiyada waxa aad u baahan doontaa in aad hesho kayd laga gato ama lagu iibiyo sarifka saamiyada sida NASDAQ ama New York Stock Exchange.
Marar badan, waxaa lagaa rabaa inaad sugto shirkad si ay dadweynaha ugu soo bandhigto bixinta hore ee dadweynaha taasoo ka dhigaysa saamigoodu inay diyaar u yihiin dadweynaha guud iyo maalgashadayaasha xiisaynaya inay wax ku iibsadaan waxna ku iibiyaan.
Caadi ahaan, maalgashadayaasha waxay isticmaalaan akoon dillaal ah si ay u iibsadaan kaydka sariflayaashan kuwaas oo taxaya qiimaha wax iibsiga (bid) ama qiimaha iibinta (soo jeedinta) saamiyada.
Qiimaha saamiyada waxaa si weyn u saameeya saadka iyo arrimaha baahida suuqa iyo doorsoomayaasha kale sidoo kale.
Hantida maguurtada ah vs saamiyada
Haddaba aan hoos ugu dhaadhacno ujeeddada ugu weyn ee qoraalkan. Waxaan isku dayi lahaa inaan is barbar dhigo labada goobood ee maalgashiga si gaar ah halkii aan ka ahaan lahaa gebi ahaanba si aan gacan uga geysto fahamka fikradda si sax ah oo aan u garto midka kugu habboon. Markaa liiska ugu horreeya ee soo-noqoshada:
Soo celinta: Hantida maguurtada ah vs. Saamiyada
Sida faa'iidooyinka ay khusayso, maalgashiga kaydka ayaa ah tan ugu habboon ee ugu habboon maadaama ay leedahay heerka soo celinta sare.
Nasiib darro, soo noqoshada maal-gashigu had iyo jeer ma aha mid joogto ah, waxaana sidoo kale jira saqaf lagu ogaanayo inta faa'iido iyo faa'iido ah ee aad ka samayn karto ganacsiga.
Isbarbardhigga labada arrimood sida ay ku saabsan tahay faa'iidooyinka iyo soo celinta si kastaba ha ahaatee waa xoogaa dicey ah oo sababa arrimo saameeya qiimaha, qiyamka, iyo soo celinta sidoo kale si weyn ugu kala duwan labada goobood.
Akhri: Sida Loo Iibsado GameStop Stock | Talaabada Hagaha Talaabada
Khatarta: Hantida ma-guurtada ah vs. saamiyada
Marka ay timaado hantida ma-guurtada ah iyo khatarta la xiriirta, waa khatarta ugu muhiimsan ee aad cilmi-baaristaada sameyso iyo wax badan oo aan ku dari karo.
Hantida ma-guurtada ahi waa ciyaar wakhti dheer socota, waligeedna waa orod ama qorshe degdeg ah oo qani ah. Waa inaad samaysaa dadaalkaaga oo aad sugto soo celintaada wakhtiga ku habboon. Guryaha ma-guurtada ah, uma baahnid inaad ka walwasho baabi'inta laakiin sidoo kale si dhakhso ah uma bixin kartid sidoo kale haddii aad u baahan tahay lacag caddaan ah oo degdeg ah, nasiib daro maalgashigaaga ma-guurtada ah ma iman karo samatabbixinta.
Khataraha kale ayaa sidoo kale jira maadaama ay khusayso maaraynta dayactirka iyo maaraynta kiraynta, si kastaba ha ahaatee waa kuwa leh guryaha kirada ah. Maalgeliye ahaan, waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso inaad kiraysato qandaraasle si uu u qabto dayactirka iyo dib u cusboonaysiinta guryahaaga iyo sidoo kale maareeyaha hantida si uu u kormeero ilaalinta kiradaada.
Tani waxay si weyn u dhimi doontaa walbahaarka iyo wakhtiga lagu bixiyo kormeerida maalgashiga.
Dhanka kale, marka la eego saamiyada, suuqa saamiyada waxaa ku jira khataro badan sida suuqa, dhaqaalaha, iyo khatarta sicir bararka.
Qiimaha saamiyada waxa kale oo uu noqon karaa mid aad u kacsan iyada oo isbedbedelka qiimaha aan la saadaalin karin ee suuqa ka jira iyo isbedbedelkan waxa sababi kara war kasta oo u dhexeeya juquraafi siyaasadeed iyo dhacdooyin shirkad gaar ah.
Saamiyada ayaa sidoo kale hoos imaanaya wareegga dhaqaalaha, siyaasadda lacagta, xeerarka, dib u eegista canshuuraha, iyo isbeddelka heerka ribada ee uu dejiyo bangiga dhexe ee dalka.
Khatarta saamiyada kale waxay noqon kartaa natiijada maalgeliyaha laftiisa. Doorashada inaadan kala duwanayn hantidaada waxay sidoo kale kuu soo bandhigaysaa khatar weyn.
Fikradayda shakhsi ahaaneed, waxaan u maleynayaa in saamiyadu ay keenaan khataro ka weyn hantida maguurtada ah, laakiin sidoo kale maskaxda ku hay in kaydku ku siin karo 1000% ROI, iyo sidoo kale waa laga saari karaa oo loo isticmaali karaa in lagu xalliyo dhibaatooyinka degdega ah. Laakiin waad garanaysaa waxay dhahaan, "khatar ka weyn, abaal-marin weyn".
Ku xiga waa liis kooban oo ah faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka maalgashi kasta si uu kaaga caawiyo hagaajinta go'aamadaada. Runtii ma jiro wax ka fiican laba jeeg gaar ahaan marka lacagtu ku lug leedahay.
Akhri: Sida Loo Iibsado Dogecoin Stock | Talaabada Hagaha Talaabada
Waa maxay faa'iidooyinka iyo khasaaraha ee hantida maguurtada vs Stocks?
Maal-gashadayaasha hantida ma-guurtada ah, waxaa jira dhowr faa'iidooyin kuwaas oo la socda in dhowr maalgashi oo hanti ma-guurto ah lagu sameeyo faylalkaaga. Maalgeliyaha hantida ma-guurtada ah ahaan, waxaad ka faa'iidaysan kartaa raasumaalkaaga oo leh lacag caddaan ah oo faa'iido leh oo waqti dheer ah oo aan lahayn khataro dareere ah.
Nasiib darro, hantida ma-guurtada ah waxay u baahan tahay saami wanaagsan oo raasamaal ah si ay u bilawdo iyo la'aanta dareeraha awgeed, lama iibin karo ogeysiis daqiiqad ah.
Khasaaraha kale waxa ka mid ah kharashyada la xidhiidha maaraynta hantida iyo wakhtiga la geliyo dayactirka iyo dayactirka.
Akhri: Sida Loo Iibsado Kaydka AMC Talaabo Talaabo ah Hagaha
Xaraashka sicir bararka
Awoodda ka faa'iidaysiga
Shaqo ka badan iibsashada saamiyada
Qaali ah oo aan sharci ahayn
Kharashaadka wax kala iibsiga oo sarreeya
Qadarinta lama dammaanad qaaday
Hagaag, taasi waa hantida ma-guurtada ah. Hadda, aynu eegno waxa kaydka ay bixiyaan.
Maalgeliye saamile ahaan, uma baahnid inaad bangiga jebiso si aad u bilowdo, iyo si aad u dhammaysato, kaydku waa dareere oo waa la iibin karaa ama labadaba wakhti kasta. Guul weyn oo saamiyada halkan.
Sidoo kale, liisaska kaydka ee laga dooranayo waa kuwo aan dhammaad lahayn oo sidaas oo kale waxay ku siinayaan hab aad ku kala duwanaan karto faylalkaaga.
Nasiib darrose, si kastaba ha ahaatee, kaydka ayaa ah mid isbedeli kara, taasoo horseedaysa maalgashi khatar ah. Sidoo kale, iibinta saamiyadaada waxay keeni kartaa cashuur faa'iido raasumaal ah.
dareere aad u sarreeya
Si fudud loo kala duwo
Lacagaha macaamilada yar
Way fududahay in lagu daro xisaabaadka hawlgabka ee faa'iidada leh ee cashuurta
Akhri: Sida Looga Iibsado IPO Stock Qiimihiisa Hore
In ka badan degganaansho badan hantida ma guurtada ah
Iibinta saamiyada waxay dhalin kartaa canshuuro waaweyn
Saamiyada qaar ayaa dhinac u dhaqaaqa sanadaha
Suurtagalnimada maalgelinta shucuurtu horseedday
Saamiyada kaydka, waa badbaado matalaysa mulkiilaha qayb jajab ah oo shirkad ah oo xaq u siinaya mulkiilaha qaybo ka mid ah hantida shirkadda iyo faa'iidada la siman ama u dhiganta inta saamiyada ay leeyihiin.
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah waxay ku lug leedahay gadashada, lahaanshaha, maaraynta, kiraynta iyo iibinta hantida ma-guurtada ah ee faa'iidada.
Sidee loo maalgashadaa hantida ma-guurtada ah?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu maalgashan karo hantida ma-guurtada ah laakiin tan ugu caansan waa aaminaadaha maalgashiga hantida maguurtada ah
Dhammaan wixii aan aragnay ilaa hadda, si firfircoon uma dooran karo labada maalgashi ee ka wanaagsan. Waxaan door bidi lahaa in aan kuu daayo doorashada adiga oo sabab u ah wax badan oo shakhsi ah.
Haddii aad eegto tilmaamaha, faa'iidooyinka, iyo khasaarooyinka maalgashi kasta, waxaad dooran kartaa midka ugu fiican adiga oo raacaya sida ugu fiican ee aad awoodid iyo waxa aan kuu rajeyn karo waa nasiibka ugu fiican, mahadsanid akhrinta.
Dullaalka khadka tooska ah ee ugu Fiican ee Ganacsiga
Sida Loo Iibsado Saamiyada
Waa maxay Shaqooyinka waxbaridda ee ugu mushaarka badan ee dibadda? | 2022
Sida Loogu Helo Shatiga Guurka New York | Hagaha Buuxa
Amaahda Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican Deynta Xun ee 2021
La -dagaallanka sumcadda xun waxay noqon kartaa mid ka mid ah waayo -aragnimada ugu walaaca badan ee qofku ku yeelan karo…
Sida Loo Maalgeliyo $ 5,000 Sanadka 2022 | Fikradaha Ganacsi ee Ugu Fiican iyo Xeeladaha
Noqoshada maalgashade wanaagsan wuxuu ka bilaabmaa fahamka sida maalgashigu u shaqeeyo, iyo sida loo maalgaliyo lacagtaada si xikmad leh iyadoon loo eegin…
Ka Bilaabmaysa Da'da 50: Siyaabaha Ugu Dhaqsaha Badan uguna Fudud 2022
Markaad 50 jir tahay, waxaa la filayaa inaad gaadhay ku dhawaad ​​dhammaan hammigaaga nolosha laakiin markaas, nolosha…
20ka Shirkadood ee ugu sarreeya ee iibsada Taayirada la isticmaalay; Dib -u -akhrinta iyo Dib -u -iibinta 2021
Ma waxaad raadinaysaa suuq aad ku iibiso taayirada la isticmaalay?! Wax dheeraad ah ha raadin. Waxaan kuu keenay liis…
Waa maxay Kaarka Deynta? Sida ay u shaqayso
Abaalmarinta kaadhadhka amaahda had iyo jeer waa mid soo jiidasho leh. Halka qaar ay si sahal ah u helaan lacag caddaan ah kharash gareynta, qaar ayaa u oggolaanaya isticmaaleyaasha…